Okufanele ukwenze eSoria: imvelo, izikhumbuzo kanye ne-gastronomy | Izindaba Zokuhamba
Okufanele ukwenze eSoria
Yini okufanele uyenze eSoria? Lo mbuzo ubuzwe izivakashi eziningi ezivela ku- UCastile noLeon. Ngoba lelo dolobha lingenye yezindawo ezithandwa kakhulu kwezokuvakasha eSpain. Futhi-ke inikeza isivakashi amagugu amaningi kokubili okwemvelo nobuciko, ngaphezu kokunamandla nokumnandi gastronomy.
Ngesimo esikhethekile phakathi kwamagquma aseMirón nase-del Castillo futhi sigezwa yi Umfula iDouro, ISoria yasungulwa njengedolobha ekupheleni kwekhulu le-XNUMX. Noma kunjalo, imidwebo okutholwe eMount Valonsadero kukhombisa ukuthi le ndawo yayivele ihleli ngesikhathi se-Iron Age. Futhi konke lokhu ngaphandle kokukhohlwa lokho, amakhilomitha ambalwa ukusuka eSoria kwakuyidolobha lobuqhawe lase Numancia. Ngamafuphi, idolobha laseCastilian linokunikeza okuningi. Uma futhi uzibuza ukuthi wenzeni eSoria, sikumema ukuthi usijoyine.
1 Yini ongayibona eSoria
1.1 ICo-Cathedral yaseSan Pedro
1.2 Amanye amasonto
1.3 I-Plaza Mayor
1.4 Isigodlo sama-Counts aseGómara
1.5 Isigodlo Semifula neSalcedo
1.6 INumantino Museum
2 Ezinye izinto okufanele uzenze eSoria
3 Yini ongayidla eSoria
Yini ongayibona eSoria
Yize incane ngosayizi wayo omncane, iSoria inegugu lesikhumbuzo elihehayo kanye nezindawo ezinhle kakhulu zezintaba zemvelo. Akusizi ngalutho ukuphakama kwamamitha ayi-1063 ngaphezu kolwandle. Sizoqala ukuvakashela eSoria.
Kuyisikhumbuzo esiyinhloko senkolo eSoria. Yakhiwa ngekhulu le-XNUMX emathanjeni esonto elidala lezindela elisagcina izakhi zalo. Ngaphandle kuyasanguluka impela, kepha ngaphakathi ngaphakathi kunamasonto amaningi futhi kuhle I-cloister yamaRoma ngaphambi kwethempeli lamanje. Lesi sakhiwo sihlanganisa lesi sitayela sokwakha nesamaGoth futhi sakhiwa ngomfanekiso weSonto LaseCollegiant laseBellanga de Duero.
Enye yezinto okufanele uyenze eSoria, empeleni, vakashela amathempeli amaningi athe chithi saka edolobheni futhi ayiqiniso ubucwebe bokwakha. Phakathi kwabo kuvelele Isonto laseSan Juan de Rabanera, Isitayela samaRoma futhi sakhiwa ngekhulu leshumi nambili. Kufanele futhi uvakashele i- isonto le-Our Lady of Espino, nezinto zalo ezibukeka njengeplati, futhi lowo oseSanto Domingo, okusembozweni yayo kukhona cishe i-paternitas trinity eyingqayizivele, ngoba kunhlanu kuphela okufana nayo emhlabeni.
Kodwa-ke, mhlawumbe uSoria udume kakhulu ngamakhemikhali ayo. Okuthakazelisa kakhulu ukuthi UMama wethu waseMyron, ithempeli elihle lama-baroque elakhiwe phezulu kwelinye elidala ngesitayela se-Romanesque.
Futhi kungashiwo okufanayo nge- isizinda seSan Saturio leyo, ebiyelwe ohlangothini lwegquma, kubonakala sengathi ilinganiselwa ebusweni bokuba yize. Yakhiwa phezu komhume lapho, ngokwenganekwane, i-anchorite yamaVisigoth yayihlala khona I-San Saturio, namuhla usanta ongumvikeli kaSoria, futhi usesitayela seBaroque. Ngaphezu kwalokho, le hermitage itholakala endaweni emangalisayo ipaki yenqaba, lapho kutholakala khona izinsalela zalokhu kwakhiwa futhi unombono onikeza imibono emangalisayo yomfula iDuero.
Okunye okumele ukwenze eSoria ukuvakashela iMeya yePlaza. Itholakala ekugcineni kwesinye se- Umgwaqo uCollado, lapho uzothola khona izitolo nemigoqo eminingi. Isikwele siyigugu ngokwaso, kodwa futhi sinezakhiwo ezinhle kakhulu. Isibonelo, i- Indlu Yezinto Ezijwayelekile, yaguqulwa ngekhulu le-XNUMX futhi okwamanje okuyindlunkulu ye-Historical Archive, noma izigodlo zabalaleli kanye nohlu lozalo oluyishumi nambili. Ekugcineni, uzothola esigcawini i- IDoña Urraca tower, kusukela ngekhulu le-XNUMX; i Umthombo Wamabhubesi, kusukela ngekhulu le-XNUMX, kanye Isonto laseSanta María la Mayor, nge-Plateresque altarpiece enhle.
Ukwakhiwa okumelele kakhulu kwefayela le- isitayela sokuvuselela umphakathi edolobheni laseCastilian. Ngaphandle yakhiwe yimizimba emibili. Eyodwa icwecwe futhi inamabhalkhoni amakhulu, kanti enye, icace bha, inemengamo ephindwe kabili yamakhothamo ayisiyingi ayishumi nambili namashumi amabili nane kumakholomu eTuscan. Ngokuphathelene nengaphakathi, lihle kakhulu igceke elinompheme esinezitezi ezimbili.
Isigodlo Semifula neSalcedo
Kwakungokomndeni ofanayo owakha owedlule. Kepha indala ngandlela thile, kusukela ekuqaleni kwekhulu le-XNUMX. Iqokomisa eyakhe ukuvuselelwa komnyango ihlotshiswe ngezinto ze-plateresque. Itholakala ePlaza de San Clemente, lapho kukhona khona i- Indlu Yokuqulwa Kwamacala Ezihlubuki, enamabhalkhoni ayo amathathu acijile.
Phakathi kwezinto okufanele uzenze eSoria, ukuvakashela le nyuziyamu kubalulekile. Njengoba sikutshelile, emaphethelweni omuzi kwakukhona Numancia, eye yangena emlandweni ngokuvinjezelwa ngesihluku eyakhuthazelela futhi yakhuthazelela ubuqhawe.
Empeleni, iyi- Imyuziyamu yemivubukulo okungokwakho izinto ze I-Paleolithic njengoba kubizwa kanjalo isiqeshana solutrean futhi i I-Neolithic. Kepha, ngokunengqondo, ibuye igcine zonke izinto ezitholakala kuNumantia yasendulo. Phakathi kwabo, labo abafakiwe kufayela le- Izitsha zobumba zeNumantine Celtiberianizibuko, amapuleti, ojeke noma iziqu okwakungokwabahlali bomuzi wobuqhawe wangaphambi kwamaRoma.
Ngakolunye uhlangothi, kufanele futhi ubone ku-Soria the Imnyuziyamu yangenkathi ephakathi yeSan Juan de Duero, iqoqo lezakhiwo zase-Romanesque ezaziyisigodlo se- I-Order of Hospitallers kaSanta John waseJerusalema futhi okumanje kungamanxiwa. Kodwa-ke, ukuyivakashela kuyamangalisa ngempela ngenxa yobukhazikhazi bayo.
Ezinye izinto okufanele uzenze eSoria
Ngaphandle kokubona izikhumbuzo, eSoria ungenza ezinye izinto eziningi. Isibonelo, landela ucingo Umzila weMachadian, egijima ngezikhala ezahlukahlukene ezihlobene nembongi enkulu. Njengoba wazi, wayehlala eSoria, lapho eshada khona Leonor Kwesobunxele, owayezofa eminyakeni embalwa kamuva. Lo mzila uzokusa kufayela le- Isonto laseSanta María la Mayor, lapho bashada khona; uku Isonto le-Espino, iphi i i-elm eyomile okuyinto ayenza ngokungafi kwesinye sezinkondlo zakhe, noma ku Isikhungo lapho afundisa khona isiFulentshi futhi usenekilasi lakhe njengoba lalinjalo.
Ungajabulela futhi amabha nezindawo zokudlela ezinhle eSoria lapho ungathola khona ama-tapas udle. Atholakala ikakhulu kulokhu okushiwo ngenhla Isikwele iSan Clemente, odume ngelika "Ishubhu", futhi yindawo lapho amaSoriya ahlangana khona ukujabulela ukudla kwawo okumnandi.
Yini ongayidla eSoria
Lokhu okungenhla, kusiholela ekutheni sikhulume nawe nge-gastronomy kaSoria. Imikhiqizo efakiwe efanayo iyafana i-truffle emnyama, the ama-sausages njenge isoseji yegazi elimnandi, the intambo futhi i ushizi.
Ngokuqondene nezitsha ezijwayelekile zedolobha, kufanele uzame ngqo iwundlu shank, okuyigazi elisha lalesi silwane esinongwe futhi lenziwa ku-grill. Kepha, uma sikhuluma ngezitsha eziboshiwe, isifundazwe sinakho busisiwe ngophawu lwewaranti. Futhi kuyizindlela zokupheka ezijwayelekile eSoria the inkunzi iyabiliswa kubhayela, the u-garlic muleteer we-cod, the itrout ebhemayo, the ama-partridges aqoshiwe futhi i imvuthu. Lezi zokugcina ziyisidlo esabiwe nezinye izindawo eziningi zaseSpain njenge Salamanca, Extremadura noma iMurcia.
Okujwayelekile kakhulu yi- paturrillo, isitshulu sezidumbu zezingulube. Ngokuqondene ne-confectionery, sikweluleka ukuthi uzame amahlumela kanye nokubekezela kwe-Almazán, the AmaMantecado y sobadilloskanye ne uphayi oqhekekile, enezingqimba eziningana zekhekhe le-puff elinokhilimu nokhilimu phakathi kwazo.
Sengiphetha, lezi ngezinye zezinto okufanele zenziwe eSoria. Uma uvakashela idolobha, uzokujabulela ifa elihle lobuciko, ukubukwa kwe- izindawo ezinhle zaseCastilian futhi a i-gastronomy emnandi. Awufuni ukuhlangana naye?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Spain amadolobha » Okufanele ukwenze eSoria
Yini ongayibona eSwitzerland